Jeneraly no hanokatra ny taona etsy amin’ny Piment Café. Rehefa niato kely, hiverina indray ny “cabaret” fanao isaky ny zoma etsy Behoririka. Fantatra fa ny tarika Jeneraly hisantatra izany amin’ity taona ity, ny zoma ho avy izao, manomboka amin’ny 9 ora alina ny tarika Jeneraly. Fotoana iray indray hiaraha-mamerina ireo hiran’i Ghaby, izay nomen’ny tarika taty aoriana aina vao izany.
Hatolotra eny amin’ny Akademia Malagasy ny Tiona Ba Gasy. Hotontosaina rahampitso 7 janoary io, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro, eny Tsimbazaza. Hiaraka hamelabelatra ny boky mandritra ny fotoana i Mbosa, Liva ary Tojo, niara-nanoratra sy nanao ny fikarohana. Samy mpikambana ao amin’ny tarika R’Imbosa rahateo izy ireo. Zava-dehibe ho an’ny hoavin’ny bà gasy ny fivoahan’ity tiona ity.
“Vazo Gasy”, iarahana amin’ny tarika Ny Any Aminay. Elaela no tsy nahenoana an’ity tarika anisan’ny mpivoy ny ban-kira tena malagasy ity. Fantatra kosa izao fa hiaka-tsehatra indray, etsy ami’ny Info Centre Soavimbahoaka ny tarika Ny Any Aminay, ny alahady 17 janoary izao, manomboka amin’ny 2 ora tolakandro.